Dowladda oo Qaban doonta Shirweyne looga hadlayo Colaada ka jirta Duuleedka Jowhar? | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo Qaban doonta Shirweyne looga hadlayo Colaada ka jirta Duuleedka Jowhar?
Muqdisho (KON) - Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Maanta ugu baaqay dhammaan kooxaha dagaalamy inay si deg-deg ah u joojiyaan dagaalada ka socda gobolka Shabeelaha Dhexe.
Madaxweynaha ayaa u mahadceliyey madax dhaqameedka, shacabka iyo bulshada rayidka ee deegaanka oo si dhab ah ula shaqeeyey dowladda, "waxaana rajo ka qabnaa in dib u heshiisiinta socota ay noqoto mid waarta oo dadka deegaanka ay si wadajir ah oo nabad ah ay ku wada noolaadaan" ayuu yiri.
"Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa AMISOM iyo Qaramada Midoobey oo iyagana dowladda ka saacidaya dhanka tasiilaadka."